कस्तो समस्या भएको व्यक्तिले खान हुँदैन लसुन - JaljalaKhabar Online Portal from Nepal
एजेन्सी । लसुनले हाम्रो खानालाई मीठो बनाउन मात्रै होइन, शरिरका लागि पनि अत्यन्तै लाभदायिक छ । यसमा पाइने धेरै किसिमका पौष्टिक तत्वहरूले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ बनाइराख्न पनि धेरै मद्दत गर्दछ । लसुनको नियमित सेवन गर्नाले शरिरका अनेक समस्याका लागि फाईदाजनक हुन्छ।
५. आँखा रोग भएको व्यक्ति स् आँखा रोगीहरूले लसुनको सेवन गर्नुहुँदैन । विशेष गरी आँखा पाकेको व्यक्तिलाई लसुनले हानी पुर्याउने गर्दछ, साथै आँखाबाट रगत पनि निकाल्न सक्दछ । आँखा रोगीहरूले लसुनको सेवन गरेमा आँखामा बादल लागेजस्तो हुने, आँखा दुख्ने, टाउको दुख्ने, स्मरण शक्ति घट्दै जाने जस्ता लक्षणहरू देखा पर्दछन्।
चिया धरै पिउनुहुन्छ ? साबधान यस्ता छन् डरलाग्दा खतरा
टाेखामा डेङ्गु रोगको बिषयमा जनचेतनामूलक र्याली सम्पन्न
स्मरण शक्ति बढाउनका लागि अमृत समान यि खानेकुरा